Mpg Recovery - Ladnaansho Mpg Files Si fudud iyo Efficently
> Resource > Ladnaansho > Mpg File Recovery
S: Ma ku badbaadi badan oo filimada aan jeclaa on my computer, oo maalin maalmaha ka mid ayaan formatted Risaalo meesha aan ku kaydsan filimada kuwa ka dib markii gurmad. Laakiin ka dib, waxaan helay files Mpg aan la furi karo oo waxaa laga yaabaa in wax qalad ah la wareejiyo. Sidaas daraaddeed waxaan la yaabay, hadii ay jirto hab lagu kalsoonaan karo in ay dib u helaan video Mpg ee filimada.
Mpg waa mid ka mid ah qaabab file video ugu caansan, iyo waxaan ka badbaadin laga yaabaa in a in badan oo files Mpg on your computer. Iyadoo qaar ka mid ah dhibaatooyinka mar walba ka dhalan khasaare xog ku saabsan naga computer ama qalab kale, oo ay lagama maarmaan tahay in ay dib u dhan xog muhiim ah si joogto ah si ay uga fogaadaan khasaare xogta.
Haddii aad u tirtiray, formatted, lumay ama faylasha Mpg geli karin, oo aad illowdo in aad iyaga nuqul ama gurmad ah waa la geli karin. Ha argagax sida aad samayn karto soo kabashada file Mpg. Wondershare software kabashada sawirka waxaa loogu talagalay in aad ka bogsato files Mpg si fudud oo waxtar leh. Download version saxda ah ee software-kabashada sawir halkan, oo raac tallaabooyinka inuu ka soo kabsado files Mpg in Windows. Tallaabooyinka loo sameeyo ee Mac la mid yihiin.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada file Mpg?
Marka loo soo dajiyo iyo abuurtaan software kabashada file Mpg ah. Hubi in dhexdhexaad ah lagu kaydiyo si fiican ku xiran your computer. Software Tani waxay aad u taageertaa inay ka soo kabsadaan Mpg videos ka qalab kala duwan sida darawalka USB, aaladaha kale ee lagu kaydiyo ballaaran oo darawal gudaha adag iwm
Talaabada 1: Dooro Risaalo meesha aad files Mpg lumay
Laga soo bilaabo liiska halkan drives macquulka ah, doortaan xijaab mid ka aad files Mpg lumay ay helaan, ka dibna riix "Scan" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Fiiro gaar ah: Dooro "Filter Options" in uu doorto qaab Mpg oo kaliya, sida hawsha kaa caawinaysaa in aad si loo yareeyo waqtiga iskaanka iyo si fiican u heli faylasha Mpg lumay. Next, riix "Scan" button.
Talaabada 2: Raadi faylasha Mpg laga badiyay
Marka scan ay ka badan tahay, faylasha Mpg lumay loo fayl ku qoran doonaa sida aad ka arki kartaa dhinaca bidix ee image hoose. Dooro kuwa aad rabto in aad soo kabsado. Next, guji "Ladnaansho".
1. Ku qor magaca faylka ama shaandhayso natiijooyinka raadinta in ay si hufan u heshid files Mpg lumay waqti gaaban.
2. Waxaad awoodi kartaa "hakinta" ama "la joojiyo" intii lagu jiray baar habka marka aad faylka Mpg lumay oo doonaya in ay si degdeg ah rectrieveit. Markaas waxaad sii wadi kartaa habka iskaanka haddii loo baahdo.
3. Riix "Save Scan" badhanka si loo badbaadiyo natiijada iskaanka si aad awoodi kartaa in ay sii wadaan soo celinta files Mpg waqti kasta oo aad jeceshahay.
Talaabada 3: Dooro folder maxalliga ah si loo badbaadiyo files Mpg
Dooro folder maxali ah halka aad u socoto si loo badbaadiyo files Mpg soo kabsaday, ka dibna riix "Ladnaansho". Halkan waxaan ku heer sare waxaad ku talinaynaa in ay doortaan meelo kale oo ka qoruhu il aad meesha aad khasaaraha files Mpg.
Halkan waxaa ah, ugu dambeyntii aad badiyay files Mpg dib ugu wada mar kale! Dheeraad ah oo dheeraad ah, software this taageertaa in aad ka bogsato oo keliya ma aha videos, laakiin sidoo kale sawiro iyo music on qalab kala duwan oo kala duwan.